माधव नेपालले आफ्नै पार्टीका प्रभावशाली केन्द्रीय सदस्यमाथि चलाए डण्डा, गरिदिए बर्खास्त ! – GALAXY
माधव नेपालले आफ्नै पार्टीका प्रभावशाली केन्द्रीय सदस्यमाथि चलाए डण्डा, गरिदिए बर्खास्त !
नेकपा एकीकृत समाजवादीले अधिवक्ता गोविन्द बन्दीको नामको केन्द्रीय सदस्यबाट हटाएको छ । असोज पहिलो साता बसेको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार बन्दीलाई केन्द्रीय सदस्य तथा कानून विभागको प्रमुख बनाएर असोज २९ मा सर्कुलर जारी गरिएको थियो ।
तर सो सर्कुलरको पार्टीभित्रै तीब्र विरोध भएपछि संशोधनसहित बुधवार जारी गरिएको अर्को सर्कुलरमा बन्दीका नाम छैन । कानून विभाग प्रमुखको जिम्मा पनि गंगालाल तुलाधरलाई दिइएको छ ।
एमाले निकट वकिलहरुमध्ये शम्भु थापा,टीकाराम भट्टराई,गोविन्द बन्दी लगायतको ठूलो टिम केपी ओलीविरुद्ध परमादेश जारी गराउन र नेकपा एमालेको वैधानिकता सम्बन्धी विवादमा माधव नेपाल पक्षमा सक्रियतापूर्वक उभिएका थिए । नेकपा एमाले विभाजनपछि टिकाराम भट्टराई एसमा लागेका छैनन् । उनी एमालेको विधान महाधिवेशनमा सहभागी भएका थिए ।